Mere Train adaghị Dị Mma Karịa Road adaghị | Chekwa ụgbọ oloko
Ụlọ > Njem Europe > Mere Train adaghị Dị Mma Karịa Road adaghị
Mgbe na-ewere a ụzọ njem, onye mgbe niile nwere na-na-akwọ. Nke ahụ pụtara na ọ dịkarịa ala, otu onye nwere na-abata na nke ọ bụla ụkwụ anụ nke bụ ebe ike gwụrụ. Tinye nchekasị nke igodo na-ekwe omume nke na-efu, na ị ga- ntinye akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè ụbọchị ọ bụla ugbu a, ka na-agụ mere ụgbọ okporo ígwè adaghị bụ ụzọ njem.
Road njem bụ aha ọjọọ n'ihi na ya elu carbon anwuru, na batrị ejikwara ụgbọala na-esi ike na ọnụ iku. Daalụ – e nwere ụzọ ka mma. ụgbọ okporo ígwè adaghị – karịsịa na ọhụrụ ụgbọ oloko – nwere a ukwuu ala mmetụta na nne ụwa, otú i nwere ike na-enwe gị ezumike ikpe-free.
Njikere akwụkwọ gị ụgbọ okporo ígwè tripping njem? Gị Chekwa ụgbọ oloko na-esi na ndị dị ọnụ ala gbaa ụgbọ okporo ígwè.
njem ogologo oge	okporo ụzọ	ụgbọ okporo ígwè njem
Ụgbọ okporo ígwè njem Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Zụlite njem Britain, Zụọnụ Travel China, Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Germany, Ụgbọ oloko njem UK, Njem Europe